१४ वर्ष मै रंगीएको सिउँदो १८ वर्षको उमेर मै पुछियो – Enepali News
१४ वर्ष मै रंगीएको सिउँदो १८ वर्षको उमेर मै पुछियो
June 19, 2020 294
काठमाडौं । गत जेठ १० गते भएको घटनाले जाजरकोटका ६ होनहार युवाले ज्यान गुमाए । नवराज विकको प्रेमिकालाई वेहुली बनाएर भगाउन भन्दै गएका १९ युवा मध्य ६ जनाको निधन भयो । रुकुम चौरजहारी स्थित युवतीको घर गएका उनीहरुलाई स्थानियको आ क्रमणमा पनि ज्यान गयो । उनीहरुको शव भेरी नदिमा फेला पर्यो । अहिले घटनाको अनुसन्धान जारी छ । तर त्यो घटनाले शेभे विक र गीता बिकको भने जिवन नै उजाडीएको छ ।
एउटा मात्र छोराको निधनले उनीहरुको परिवार भताभुंग भएको छ । कलिलो उमेरमा विवाह गरेर ल्याएकी बुहारी पनि १७ वर्षको उमेरमै विधुवा वनेकी छन् भने २ वर्षकी नातिनीले बुवाको अनुभव पनि गर्न पाइनन् । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका, मोटेला टोलकी सुनिता सुनारको आँखा जेठ १० गते देखि ओभाएका छैनन् । काखमा २ वर्षको छोरी लिएर त्यसै टोलाउँछिन् ।
उनको विवाह ४ वर्ष अघि वारी रुकुम पश्चिमको चौरजाहरी नगरपालिका–१, लामिछाने गाउँका टीकाराम विकसंग भएको थियो । कलिलै उमेरमा विवाह गरेका यि जोडीले विवाह गरेको २ वर्षमै छोरीलाई जन्म दिएका थिए । विवाह गर्दा सुनिताको उमेर १४ वर्षको मात्र थियो ।
सुनिता पनि बाबुआमाकी एकमात्र छोरी हुन्, यता टिकाराम पनि शेरेर गीताका एकमात्र छोरा थिए । १४ वर्षको उमेरकै टिकारामलाई माया गरेर सिउँदो रंग्याएकी सुनिताको १८ वर्षकै उमेरमा रंगिन सिउँदो पुछिएको छ । बुहारी भित्र्याउँदा शेभेर गीता निकै खुसी भएका थिए । दुई वर्ष पछि नातिनी पनि धर्तीमा आएपछि त्यो खुसी दुईगुना भएको थियो । तर जेठ १० गतेको घटनाले अहिले उनीहरुको सबै खुसी भताभुंग पारिदियो । टीकारामको शव जेठ ११ गते भेरी नदीमा फेला परेको थियो ।
उक्त घटनाले सुनिताको सिउँदोमात्र उजाडिएन, दुई वर्षकी अवोध बालिकाले बुवाको अनुभव पनि गर्न पाइनन् । बुढेसकालमा सहारा बन्ला भन्ने आशा गरेको एकमात्र छोरालाई शेभे र गीता दम्पत्तिले गुमाए पछि अहिले विक्षिप्त बनेका छन् । परिवारको एक मात्र छोरा उनी आर्थिक जिम्मेवारी पनि निभाएका थिए । बुवाआमाको सहारा बनेका उनले मोवाइल बनाउने सिप सिकेका थिए । त्यसैवाट उनले घर खर्च चलाएका थिए ।
आफ्नी बहिनीको पढाइ खर्च पनि त्यसैवाट चलेको थियो । छोरा गुमाएको पीडा त छँदै छ अब यो परिवारमा आर्थिक समस्या पनि थपिएको छ । आम्दानीको बाटो केही छैन भने कलिली बुहारीको खाली सिउँदोले बृद्ध बुवाआमालाई थप पीडा दिन्छ ।
बहिनी सुमित्राको पढाइ खर्च कसरी चलाउने ? ऋण कसरी तिर्ने अब शेभे परिवारमा अर्को विपत्ती आएको छ । सुनितालाई आफ्ना पति भेरीमा डुवेका होलान् भन्ने विश्वास नै लागेन । भेल आएको बेलामा पनि टिकाराम पुलवाट नदिमा हामफालेर नदि वारपार गर्थे । भेरीले उनलाई बगाउने कुनै सम्भावना नभएको सुनिताको भनाई छ ।
टिकाराम हराए भन्ने सुनेपछि पनि उनलाई मृ त्यु नै भयो होला भन्ने कल्पना नगरेको बताउँछिन् । कतिवेला टुप्लुक्क आइपुग्छन् भन्ने आशमा बसेकी सुनिताले श्रीमानको हेर्नै नसक्ने अवस्थाको शव देख्नुपर्यो ।
Prevदुबई बाट नेपाल फर्किएका १०१ जना महिला मध्ये ९४ जना गर्भवती
Nextसुशान्त सिंहलाई आजको अवस्थामा पुर्याएको भन्दै फ्यानहरुले सडकमा नै यसरी हाने करण जोहरलाई झापड, जलाए पुत्ला
टेम्पो चलाउन देऊ, नभए राहत देऊ !
गण्डक कोभिड अस्पतालबाट ८ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज
संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा अवरोधपछि पोखरामा गोली चल्यो : ८ जना पक्राउ
तपाईंको यो वर्ष कस्तो हुँदैछ ? हेर्नुहोस् ओजराज उपाध्यायले लेखेकाे वार्षिक राशिफल (1913)
श्रीमानले पि’टेर भागेपछी लक डाउनमा आमा छोरीको यस्तो बिचल्ली, मनै रुवाउने भिडियो हेर्नुस (1485)